Faallo:Ra’iisul Wasaaraha soo socda waa inuusan noqon Qurbajoogta | Warfaafiye
Warfaafiye Qormooyinka	Faallo:Ra’iisul Wasaaraha soo socda waa inuusan noqon Qurbajoogta
Oct 1st, 2012 – by admin0
Soomaaliya waxay u baahan tahay isbadal iyo horumar dhan kasta ah. Dib u dhiska howlaha amaanka iyo midda midnimada Qaranka ayaa waxay leeyihiin mudnaanta ugu sareysa marka laga hadlayo isbadalka.
Waayo adag ee xannuun badan aadna u kala duwan ayey Soomaaliya soo martay wixii ka danbeeyay inqilaabkii Milateriga iyo xukunkii kaligii talisnimada, nidaamkaasoo wadanka u hoggaamiyay aaqiritaanka inuu galo duruufo adag, burbur taariikheed iyo fashil dowladeed. Dagaalkii lagu soo jabay ee lala galay Ethiopia, wuxuu horseeday collaadaha iyo dagaalada hubeysan ee ilaa hada socdaan, waxay keentay dad iyo duunyoi inay ku haftaan, dhashaana bur bur bini’aadanimo ah, qax iyo barakac.
Sidoo kale, Waddankii waa qeybsamay, waana lagu kala kacay, laakiin iyada oo sidaa xaaladdu tahay ayaa haddana waxaa dhammaanin danihii iyo damacyadii guracnaa ee qabaa’ilka qaarkood iyo wadamada deriska ah ay wadaan inay weli iska kaashadaan mushaakilkaan in lagu sii jiro. Waxaa la arkay qabaa’il dowladaha deriska u sameyeen maamul-goboleedyo u jiri kara si ka madaxbannaan dowlad kasta ee dhexe ee waddanka ka dhalata. Waxaa kaloo intaas sii dheer inay jiraan Maamul gobaleedyo la yimaada shirkado maafiyo ah, calooshood u shaqeystayaal ah iyo kuwo kale ee sunta ku aasa badaha iyo berrigaba, mana soo muuqato awood ama nidaam si sharci ah u kortorooli karo.
Koofurta iyo bartamaha dalkeenna waxaa qarqiyeen mowjado colaadeed oo aan dhammaad lahayn. Waana dhulka ugu ballaaran ee haddana ugu kheyraadka badan kuna hoos jira awoodaha kontorool ee shabakadaha argagixisda caalamiga ah sida Al-qaacida iyo khawaarijta Al-Shabaab iwm. Waa dhab in dhulkaas ilaa hadda lagu qiimeyn karo meel ka mid ah dunida oo ay ka jirto dembiyada ugu axmaqsan ee mujtamac aadami ah laga galo. Waa kawaan basharka qoorta looga gooyo iyo goob ay ka falgalaan shisheeye dambiilayaal ah oo aan dalalkoodii ku laaban karin.
Xal kasta oo la isku dayay Soomaaliya wey hagaagi la’ dahay. Inkastoo dadaal la sameeyo, haddana beesha caalamka sidii la doono uguma hagarbaxdo dadka Soomaaliyeed. 12-kii sano ee u danbeeyayna waxaa la soo tijaabiyay jiritaanka Dowladdo KMG ah, si loo arko wax un wadciga lagu nool yahay wax ka beddeli kara, hase ahaatee, xal in la soo taabto iska daayee ay arrintu waayaha qaarkood gaarto heerr faro ka bax ah, is-qabqabsi iyo fashilna ay ku afmeeranto. Ma dhacdo in la wada shaqeeyo, meel looga soo wada jeesto qaddiyadda waddanka ee u baahan in dhinacyo badan laga xaliyo. Waxaa kaloo laga bixi waayay masiibooyinka ka dhasha colaadaha iyo aafooyinka dabiiciga ah intaba.
Midda hadda dhalatay waxaa la yiri waa Dowlad joogto ah, hase ahaatee Dastuurkeeda ayaa KMG ah ilaa laga gaarayo ansixin afti dadweyne. Su’aasha taagan, Yaa ehel u noqon doona Dowladdan ineysan noqon mid u fashilmin si la mid sidii kuwii hore ee la soo arkay oo kale?.
Qurba joog iyo dadkii ku sugnaa wadanka ayaa isku heysta u tartamidda xilalka Dowladda, su’aasha la isweydiin karo, yaa ku habboon? waxaa la aaminsan yahay ama dad badan rumeysan yihiin Qurba joogta in loo heysto inay yihiin dabaqad ladan sida hab dhaqankooda lagu arkay, hase ahaatee, ay u yimaadeen wadanka si dhalanteed ah. sida waxa loogu yeero oo kale, “Summer job”.
Dadkii u adkeystay dhibaatooyinkii nolosha lagu soo arkay ayaa qurbajoogta qaarkii la tahay iney u arki karaan dadkaasi yihiin kuwo waayaha jilciyeen, hase ahaatee, taasi ay tahay daacayad raqiis ah. Inkastoo ay fiican tahay in dhaqamo kala duwan la soo arko, haddana waxaa asal ah mida wadanka gudahiisa ah, taasoo mar walba xambaarsan wadaniyad iyo xamaasad la xariirta iney wax is-beddelaan.
Waxaa loo maleeyaa Qurba joogtu iney yihiin dad dhinac walba ka dhisan, aqoon iyo isku filnaan gaaray, hase ahaatee dhab ahaantii yihiin kuwa aan sidaas wada ahayn, ayna jiraan kuwo wadanka halaag kale u horseedi kara, marka ay timaado iney xilalka qaranka loo magacaabo, horay ayaana loo arkay dad ceynkaas ku sifoobay.
Waxay isku heystaan iney yihiin dad kaalin kasta buuxin kara, dhisi kara xiriirada caalamiga ee Soomaaliya, xirfado aqooneed oo dhammeystirana leeyihiin, laakiin waxaa la ogaaday kuwa aan dalka meelna ugu bixin, waayihii ay ku noolaayeena ay wax ku barteen ay yihiin kuwo dhinac walba uga tayo sareeyaan kuwa wadanka ugu qaxay dhibaatooyinkii lasoo maray awgood.
Madaxweynaha cusub, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud waa inuu tixgeliyaa marka laga hadlayo dhismaha Dowladda in xilalka ugu muhiinsan ay kaalin hormoodnimo ah ku yeeshaan dadka u adkeystay waayihii adkaa ee la soo maray, maxaa yeelay waxay si nuxur leh u fahamsan yihiin dareenka jira iyo waxqabadka u baahan in lala beegsado. Qurba joogta haddii ay ku bataan xilalka soo socda ee xukuummadda cusub waa iyadoo wax kasta oo horumar curin lahaa loo fasaxay iney qaribmaan.
Qurba joogga wuxuu u dabran yahay walaac aan hareyn, kana heysta sidii uu iskaaga bixin lahaa deymo fara badan oo looga leeyahay bankiyada iyo shirkado kale ee ku yaal wadamadii ay u magan galeen, taas macnaheeda waxaa waaye iney u soo shaqo tageen sidii ay iskaga bixin lahaayeen wixii deymo ah oo ay qabaan, laakiin kan dalka gudahiisa aan meelna weligii uga bixin muddadii colaadihii sokeeye iyo aafooyinkii kale jireen wuxuu ka madaxbannaanaa inuu u qoolmo wax deyn ah, hase ahaatee, wuxuu diyaar u yahay inuu dhiso nabadda, amaanka, aqoonta iyo horumarka dadkiisa iyo dalkiisa.
Wax kasta yeelkadeed, Madaxweynuhu waa inuu ku fakiraa Ra’iisul Wasaaraha soo socda inuusan noqon qof qurba joog ah, laakiin yahay qof dadkiisa la qaybsaday duruufihii qalafsanaa, waddanka aan meel uga bixin, kaasi ayaa noqon kara qof la jaan qaadi kara isbadalka cusub, waana inuu awood u yeeshaa inuu soo dhiso xukuumad ka kooban siyaasiyiin iyo aqoonyahanno lagu soo doortay hufanaan, sumcad, tayo iyo karti, qurba joogtana ay ku yar tahay.